जाडोमा बढ्दै छालाको समस्या, के छ समाधानको उपाय ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार जाडोमा बढ्दै छालाको समस्या, के छ समाधानको उपाय ?
२०७८, ३० कार्तिक मंगलवार ०६:३४
डा. अमात्यले भनिन्, “जाडो होस् वा गर्मी, छालाको सुरक्षाका लागि अनिवार्य रूपमा सनस्क्रिन प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले छालालाई सूर्यको किरणबाट बचाउँछ ।” अर्का छालारोग विशेषज्ञ डा. धमेन्द्र कर्णले जाडोमा छाला रुखो, फुट्ने, सुक्खा हुने समस्या हुनुका साथै छाला चिलाउने, छालाको पत्र निस्कने, अनुहारमा चायाँ, पोतो आउने समस्या हुने जानकारी दिए ।
डा. कर्ण पर्याप्त मात्रामा पानी वा झोलिलो खानेकुरा खानुका साथै अनुहारमा तातोपानीको वाफ लिनु उपयुक्त हुने बताउछन्। छाला स्वस्थ राख्ने भन्दा हामी छालाको बाहिरी स्याहारमा मात्र ध्यान दिन्छौँ तर यसमा आन्तरिक रूपले नै सचेत हुनुपर्छ । यो समाचारगोरखापत्र दैनिकमा छ ।
Previous articleएआइजी पाललाई ‘पक्रन’ प्रहरीभित्रै षड्यन्त्र
Next articleबन्दले म्याग्दीको जनजीवन प्रभावित